Contact Us – HORNCABLE
July 29, 2018	Barnaamijyada, Ciyaarro / Sports, Contact Us, Maqaallo, Musalsalada, Wararka Maanta Leave a comment
Goolhayihii xulka qaranka kubadda cagta ee Soomaaliya iyo naadiga Elman, Axmed Cabdullaahi Macallin, ayaa ku geeriyooday isbitaal ku yaalla magaalada Isparta ee dalka Turkiga. Sida uu BBC u sheegay Sh. Maxamed Maxamuud oo ah guddoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee Turkiga, cayaartoyga ayaa dalkaas u joogay muddo sannad ah daryeel caafimaad. “Sababta ...
Cahid Tamiimi oo ah gabar yar oo reer Falastiin ayaa xabsiga laga sii daayay kaddib markii 8 bilood ay ku xirnayd halkaasi, waxaana la xiray kaddib markii dharbaaxo iyo laad ay ku dhufatay askari Israa’iil agagaarka dhulka lahaysto ee Daanta galbeed. Cahid Tamimi ayaa sannadkii hore kasoo muuqatay muuqaal ay ...
Iyadoo wafdiga Madaxweynaha Somaliya Maxamed C/laahi Farmaajo ay ku sugan yihiin Magaalada Asmara ee dalka Eritrea, ayaa Wasiirka Warfaafinta Somaliya Daahir Maxamuud Geelle, wuxuu ka hadlay doorka Eritrea ay ka qaadan karto isu soo dhawaanshaha Somaliya iyo Imaaraadka Carabta. Daahir Geelle oo la hadlay Idaacada VOA, ayaa wuxuu sheegay marka ...